रामवीरले छोडेपनि म चुनाव लड्दिन : बामदेव गौतम | ebaglung.com
२०७५ आश्विन २४, बुधबार ०४:१०	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
असोज २३ गते बिहानैदेखि प्रतिनिधिसभा काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ मा निर्वाचित सांसद रामविर मानन्धरले नेकपाका नेता बामदेव गौतमका लागि पद त्याग गरेको चर्चा चलिरहेको थियो । अपरान्ह स्वयं रामविर मानन्धरले पत्रकार सम्मेलन गरेर बामदेव गौतमका लागि आफुले पदबाट राजिनामा दिएको समाचार अनलाईनमा हेर्दै थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका सचिव राम थापाको फोनले समाचारबाट ध्यान फोनतर्फ गरायो । अति मृदुभाषी थापाले राम सर, महासंघको कार्यालयमा आउनु प¥यो भन्नु भयो । आजभोली म प्राय कार्यक्रमहरुमा जादिन तर राम जीले फोनै गरेर आउन भनेका विशेष कार्यक्रमहरुमा जाने गरेको छु । उहाँले भनेपछि खास होला भन्ने लाग्यो, अनि सोधे केही विशेष छ र सर ? उताबाट राम थापाको जवाफ थियो । बामदेव गौतम आउनु भएको छ । पत्रकार सम्मेलन हुदैछ, बरु छिटै आउनु होला ।